तपाई अप्ठ्यारो मोडमा हुनुहुन्छ ? यसरी एक्लै अघि बढ्नुहोस – Jagaran Nepal
तपाई अप्ठ्यारो मोडमा हुनुहुन्छ ? यसरी एक्लै अघि बढ्नुहोस
कसरी अाफैसँग कुरा गरेर अफ्ठ्याराे परिस्थितिमा पनि अगाडी बढ्न सकिन्छ ? हतास या निराश हुनुभइकाे छ भने अाफ्ना राम्रा पक्षहरू, अाफुले अहिले सम्म पाएका उपलब्धीहरू कागजमा लेख्नुहाेस् । त्यसपछी ती कुराहरूलाइ बारम्बार दाेहेरीर्याएर पढ्नुहाेस् । अावाज निकालेर पढ्नुहाेस् । एनाकाे अगाडी उभिएर पढ्नुहाेस् ।तपाइकाे काममा सहयाेग गर्न सक्ने या तपाइलाइ साथ दिन सक्ने, तपाइकाे बारेमा राम्राे साेच्ने व्याक्तिहरू काे-काे छन् ।
कुनैपनि काममा कसरी सफलता प्राप्त हुन्छ ? हामी दिनभर जे गर्छौ, जति गर्छौ, जसरी गर्छौ, त्यसको लक्ष्य के होला ? हामी के गरिरहेका छौं ? किन गरिरहेका छौं ? कसरी गरिरहेका छौं ? कसका लागि गरिरहेका छौं ?वास्तवमा हामी त्यही काम गरिरहेका छौं, जो हाम्रो जीवनको आवश्यक्ता हो । हामी त्यसरी नै गरिरहेका छौं, जस्तो हाम्रो ढंग पुग्छ ।
सफलताको सूत्र सफलता । आफैमा सुन्दर शब्दावली हो । तर, सफलता प्राप्त गर्नका लागि समूचित मिहनेत, लगाव, श्रम, इच्छाशक्ति, निरन्तरता आवश्यक हुन्छ ।खप्तड स्वामीले सफलताको सूत्र यसरी बताएका थिए, ‘आत्माविश्वास, लगनसिलता र निरन्तर प्रयास ।’ सफलताको लागि लक्ष्य पहिलो कुरा हो । कुनैपनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि लक्ष्य बनाउनुपर्छ ।
बरु निरन्तर ढटिरहनुपर्छ । निरन्तरको प्रयासले जो कोहि, सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् ।श्रमको कुनै विकल्प छैन ।श्रमविना सफलताको कल्पना गर्नु बेकार छ ।बलिउड अभिनेताले भन्ने गरेका छन्, ‘श्रम नै हरेक समस्याको समाधान हो ।’ श्रम गर्नुपर्छ। श्रमले हामीलाई बाँच्न सिकाउँछ ।यसका साथै सफलता प्रप्त गर्नका लागि केहि प्रचलित सूत्र छन् ।